Ny faritra indostrialy vaovao dia ao Yantai ETDZ
Yantai Xinyang Electronics Co., Ltd. Niorina tamin'ny taona 2002, tafiditra amin'ny lohatenin'ny orinasa teknolojia avo lenta. Manana atrikasa ao amin'ny distrika zhenhua yantai fushan distrika izahay ary ao amin'ny lalana xiangang, distrikan'i yantai etdz, manana olona mihoatra ny 300. Famokarana lehibe dia: famantaranandro sy famantaranandro moto vokatra, manja andriamby, andian-dahatsoratra Module jacquard modely, fanjaitra ho an'ny computeries miloko knitting milina sy cirlular knitting milina, maotera fitaovana maotera.
Ny orinasanay dia manana ireo matihanina manana kalitao avo lenta izay mirotsaka amin'ny indostria mandritra ny telopolo taona, ary nanangona traikefa manan-karena tamin'ny fametahana metaly, fanodinana fitaovana vita amin'ny andriamby malefaka ary fanodinana coil Precision. Azontsika atao ny mandray anjara amin'ny sehatry ny fampiroboroboana, ny famokarana, ny fanodinana ny Smart Motor, ny coil, ny andriamby, ny fitombenan'ny faritra nohitsakitsahana ho an'ny fiambenana, ny lamba, ny fifandraisana, ny fiara. sns Saha.
Ny orinasanay dia nanafatra fitaovana famokarana maoderina marobe sy milina fanandramana izay avy any Switherland sy Japon, ary tato ho ato dia nanambola vola be izahay hanatsarana ireo fitaovana mandeha ho azy. Ho azo ny tombony mifaninana amin'ny famokarana eny an-tsena.
Ny orinasanay dia nanitrikitrika ny "hanomezana fahafaham-po ny mpanjifanay dia ny fikatsahana maharitra mandrakizay", mba hanao izay tsara indrindra azonay hanomezana ny vokatra sy ny serivisy voalohany.
Ny orinasanay dia misy tanàna tsara tarehy amoron-dranomasina ---- Yantai, Telopolo minitra miala ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Penglai, mandray tsara ny mpanjifa vaovao sy taloha hitsidika ny orinasanay ho an'ny fiaraha-miasa.
1. Taratasy fanamarinana rafitra fitantanana kalitao
2. taratasy fanamarinana momba ny patanty
3. Fanamarinana avo lenta
4. Fisoratana anarana amin'ny mari-barotra
5. Orinasa manam-pahaizana manokana, vaovao, gazela, sns.
Beijing Airlines fanamarinana
Taona 2002 ：Atsangano ny Yantai Xinyang Electronics Factory
Taona 2003 ：Coil famantaranandro OEM Quartz
Taona 2004 ：Mahomby mamokatra andriamby jacquard elektronika
Taona 2005 ：Fantaro ny fahaizan'ny famokarana maotera famantaranandro quartz
Taona 2006 ：Fanoratana ofisialy Yantai Xinyang Electronics Co., Ltd.
Taona 2008 ：Mamboatra milina miolakolaka ho azy
Taona 2009 ：Manomboka amin'ny famokarana maoderina jacquard elektronika ary amidy amin'ny tsenan'ny demostika
Taona 2011 ：Fampahafantarana feno ireo fitaovana mandeha ho azy
2012y ：Midira amin'ny sehatry ny fitaovana fiara
Taona 2014 ：Lany ofisialy ny fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001
2015y ：Namindra ny tranoben'ny orinasa vaovao ny orinasa
2016y ：Mahomby amin'ny famokarana ny masinina famantaranandro 、 fanjaitra tenona lamba
2017taona ：Fivarotana modely jacquard elektronika amin'ny tsena any ivelany
Taona 2018 ：Nahazo ny tombam-bidin'ny orinasa teknolojia avo lenta
Taona 2019 ：Ny vokatra Module faharoa amin'ny tsena
Taona 2020 ：Nampiasaina tamim-pomba ofisialy ny valan-javaboary vaovao
2021 taona ：Ny vokatra Module an'ny taranaka fahatelo eny an-tsena
(atrikasa mandeha ho azy)
(Atrikasa mihodina Coil)
(Atrikasa fampidirana tsindrona)
(Atrikasa Fivoriambe Module)
Rafitra fandrefesana Metallographic
Efitra hamandoana ambany
Fitaovana fandrefesana Nikon
Fitsapana fitifirana sira
Ataovy am-pahatsorana ireo faritra elektromagnetisma miorina tsara indrindra
Manatsara hatrany ary mamorona marika malaza eo amin'ny sehatry ny indostria